6.1 Polylines - Geofumadas
I-Polylines yinto eyenziwe ngamacandelo omgca, i-arcs, okanye ukudibana kokubili. Kwaye ngelixa sikwazi ukudweba imigca kunye nee-arcs ezizimeleyo ezinomxholo wokugqibela njengendawo yokuqala yomnye umgca okanye i-arc, kwaye ngoko ke ukudala imilo efanayo, iipollines ziyinzuzo yokuba zonke iigqeba ezizenzayo ziziphatha njengento enye . Ngaloo ndlela, siza kuba neengxaki apho kulungele ukudala i-polyline eyahlukeneyo yamacandelo kunye neendawo ezizimeleyo, ngakumbi xa kufuneka wenze izilungiso, kulula ukuhlela utshintsho kwinto enye kunezinye. Enye inzuzo kukuba siyakwazi ukuchaza ubungakanani bokuqala kunye nokugqibela kwisigaba esisodwa se-polyline uze uguqule kwakhona lo bunzima kwicandelo elilandelayo. Ukongezelela, ukwakha i-polylines kuqinisekisa ukuba iqela lokuqala lecandelo lomgca okanye i-arc lidibaniswe kwinqanaba langaphambili. Le manyano kuya kuba enye eziphezulu ze Somzobo onamacala amaninzi kunye naxa Sitshintsha zolule okanye uhambise (njengoko kuxoxwa ngezantsi), unxibelelwano phakathi inxalenye ezimbini kuhlala isebenza, evumela ngokukhuselekileyo ukudala yakhiwe evaliweyo, apho zinezibonelelo ezahlukeneyo bazakuyivuyela kamva: xa sibona imimandla kwisiqendu esifanayo kwaye xa sifunda ukukhishwa kwezinto kunye nobumnyama.
Njengoko iipollines ziyiinkalo zemizila kunye nee-arcs, ukhetho oluchanekileyo luvumela ukuba sikwazi ukucacisa iiparameters esele sazi ukudala imigca okanye i-arcs kumntu ngamnye. Xa senza umyalelo wokudala iipollines, i-Autocad iyasicela iqela lokuqala lokuqala, ukusuka apho sinokugqiba isigqibo sokuba ngaba iqela lokuqala lilayini okanye i-arc kwaye ke, bonise iiparameter eziyimfuneko ukuze uyidwebe.
Emva kokuba sitsalise amabini amabini okanye amaninzi, phakathi kweendlela zokukhetha umgca wolawulo ukuvala i-polyline, oko kukuthi, ukudibanisa indawo yokugqibela kunye neyokuqala. I-polyline ivalwe nge-arc okanye umgca kuxhomekeke kwimeko yendawo yokugqibela edityanisiweyo, nangona kubonakala ukuba akuvumelekanga ukuvala i-polyline. Ekugqibeleni, cinga ukuba kunokwenzeka ukutshintsha ubukhulu bokuqala kunye nokugqibela kwinqanaba ngalinye le polyline, ukwandisa amathuba alo ekudalweni kweefom.
Post edlulileyo«Edlulileyo ISAHLUKO 6: IINJONGO ZESICWANGCISO
Post Next 6.2 SplinesOkulandelayo "